Juventus Oo Ka Diiday Byern Iney Seddex Dhibcood Ka Qaadaan Turino. | www.banooni.net
Juventus Oo Ka Diiday Byern Iney Seddex Dhibcood Ka Qaadaan Turino.
Ciyaar xiiso badan ayaa ka dhacay magaalada Turin madaama Juve iyo Bayern 2-2 ku kala baxeen sidoo kalena labadaan naadi 4-gool iska dhaliyeen.
Labada xidig ee badalka kusoo haleen Dybala & Sturaro ayaa ka jawaab celiyeen goolal ay Bayern u dhaliyeen Muller iyo Robben.
Macalin Pep Guardiola ayaa ka xumaaday in kooxdiisa Bayern laga daba imaado ayadoo qaybtii labaad ee kulankan labo gool oo nadiif ah ku hogaamineesay kulan ka tirsanaa wareega 16-aad ee Champion-ka lugtiisa kowaad.
Macalin Allegri kooxdiisa ilaa mudo 60-daqiiqo ah awood dheeri ah ayaa loo sheegtay balse wuxu ku amaanan yahay isbadalka uu shaxdiisa ku sameeyay madaama soo galintiisa Hernanes, Morata & Sturaro uusan ku qasaarin.
Juve ayaa garoonkeeda ku qaabishay naadiga Bayern Munich oo dhibaato dhanka daafaca ah heesatay weliba macalin Guardiola ayaa ku qasbanaaday inuu daafaca gadaale ka cayaarsiiyo Kimmich oo ah cayaaryahan khadka dhexe ka cayaaro sidoo kalena dherirkiisa yahay 1.67m.
Laakiin kooxda Bayern Munich marnaba lagama dareemin habac sanaan dhanka daafaca madaama ay kubad heesashadooda gaartay 70% qaybtii hore.
Juventus culees xoogan ayay xidigaha Bayern kala kulantay waxaana loo diiday kooxda reer Talyaani inay kubada hesho inta badan qaybtii hore.
Daqiiqadii 4-aad Arturo Vidal ayaa laad xoogan goosha Juve la helay balse goolhaye Buffon ayaa si geesinimo ku dheehan u bad baadiyay laadkii halista ahaa.
Mandzukic ayaa daqiiqadii 12-aad helay kubad gool loo filan karay oo uu dhinaca bidix kasoo karoosay Dybala balse Mandzukic ayaa awoodi waayay inuu kubada goosha la helo.
Xidigaha Bayern ayaa sameeyeen isku dhiib aad loola yaabay waxayna kubad heesashadooda gaartay 77% waxayna Robben iyo Douglas Costa u diideen daafacyada Juve ee dhanka garbaha inay wax dhaqaaq ah sameeyaan.
Muller ayaa helay kubad si rasmi ah gool loogu filan karay daqiiqadii 14-aad wuxuuna baas wacan ka helay Lewandowski laakiin Muller ayaa awoodi waayay inuu lugta si fiican kubada ula helo waxaana ka bixiyeen daafacyada Juve.
Lewandowski ayaa madaxa si qurxoon ula helay kubad laad xor ahayd ee uu Thiago Alcantara soo karoosay daqiiqadii 33-aad balse goolhaye Buffon ayaa gacanta ku dhigay.
Kooxda Bayern dadaalkii ay sameesay qaybtii hore kuma qasaarin waxaana ugu dambeyntii daafacyada Juve qalbi jab ku riday Thomas Muller oo cayaarta ka dhigay 1-0 daqiiqadii 43-aad.
Robben ayaa dhanka midig kubad joog sare kasoo karoosay waxaana soo celiyay Costa ayadoo laad xoogan ah kubadii waxay ku dhacday Barzagli waxayna u tagtay Muller oo hortaaga goosha Juventus si sahlan ayuuna cag ugu qabtay goosha.
Qaybtii hore ee kulankan waxaa lagu kala nastay 1-0 oo ay hogaanka ku heesay kooxda Bayern Munich sidoo kalena in badan gacan sareesay.
Goolka Muller Juve ka dhaliyay wuxuu ahaa goolkii ugu horeeyay ee kooxdan laga dhaliyo mudo 14-saacadood iyo 39-daqiiqo kadib waxaana Juve ugu dambeesay gool laga dhaliyo bishii Janaayo ee bilawgii sanadkan!
Macalin Allegri ayaa qaybtii labaad isbadal ku sameeyay shaxdiisa wuxuuna gudaha garoonka kusoo badalay Claudio Marchisio asigoo keenay Hernanes.
Balse midaas culeeska kama qaadin Juventus waxaana si toos ah uga sii naxsaday Arjen Robben oo cayaarta ka dhigay 2-0 daqiiqadii 55-aad.
Kubadan ayaa ahayd mid weerar celis ah waxaana caawinaad ka geestay Lewandowski balse Robben oo dhanka midig joogay ayaa kubada si qurxoon u xirfadeeyay sidoo kalena ayadoo qaloocan ayuu goosha Juve dhex dhigay laad xoogan oo ahaa goolashii lagu yaqiinay Robben.
Paul Dybala ayaa kooxda Juventus dib ugu soo celiyay asigoo cayaarta ka dhigay 2-1 daqiiqadii 63-aad waxaana kubadan caawinaad ka geestay Mandzukic kadib markii uu qalad galay daafaca dhalinta yar Kimmich.
Juve xidigaheed ayaa cadaadis dheeraad ah la imaadeen wuxuuna kulankan noqday mid furan sida darteed kubad weerar celis ah ayuu Mandzukic si qurux badan u siiyay Cuadrado asigoo laad xoogan oo joog sare la helay goosha Bayern balse goolhaye Neuer ayaa ka bad baadiyay daqiiqadii 69-aad.
Macalin Guardiola oo dareemay culeeska kooxdiisa soo koray ayaa Mehdi Banatia soo galiyay wuxuuna badalay Juan Bernat si uu daafaca Bayern u xoojiyo daqiiqadii 74-aad ayuu Pep go’aankan qaatay.
Sidoo kale macalin Allegri isagana kooxdiisa wuxuu kusoo kordhiyay Alvaro Morata si daafaca Bayern nasiino u helin wuxuuna badalay Dybala.
Kooxda Juve dadaalkii ay sameesay ayay sii waday waxayna heshay goolkii bar bar dhaca daqiiqadii 77-aad, Stefano Sturaro ayaa cayaarta 2-2 ka dhigay kadib markii uu xidigan si karti u dheehan ku dhameestiran kubad madaxa ah ee uu Morata dhanka bidix kasoo tuuray.
Ugu dambeyntii kulankan xiisaha badan labadaan naadi fursado dheeri ah ayay isku heleen balse waxba so kordhinin waxayna cayaarta kusoo idlaatay 2-2.
Kooxda Juve ayaa sameesay soo laabasho geesinimo ku dheehan madaama ay labo gool la imaadeen qaybtii labaad balse lugta labaad garoonka Bayern Munich ayaa lagu kala bixi doonaa waxayna Bayern haatan heesataa labo gool oo ay kusoo dhalisay meel ka baxsan garoonkeeda.
No Responses to “Juventus Oo Ka Diiday Byern Iney Seddex Dhibcood Ka Qaadaan Turino.”